Nch Wavepad Sound Editor 8 Ikhodi Registration [Master-Edishini Ukuqhuma]
Ikhaya » Crack & activators » Wavepad Sound Editor 8 Crack
ngu Anastasiya Libra | Februwari 13, 2018
isofthiwe Wavepad Sound Editor is a professional umsindo nomculo umhleli Windows naku-Mac. Mahhala Wavepad Ikhodi yokubhalisa 2018 kusiza abasebenzisi ukukhiqiza ukuhlela umsindo azikhethele. izici laso eliyingqayizivele ukwenza kube iyashelela uthembele WavePad umhleli umsindo. WavePad usebenza njengendlela noma mp3 Umhleli. Kodwa Mahhala Wavepad Ikhodi yokubhalisa 2018 futhi isekela ezinye izakhiwo ifayela kuhlanganise vox, GSM, WMA, umsindo yangempela, UKUZE, AIF, FLAC, Ogg, futhi nokuningi.
Wavepad Sound Editor 8 Uhlolojikelele
Mahhala Wavepad Ikhodi yokubhalisa 2018 Ungarekhoda bese uhlela umculo, izwi nezinye izinto eziqoshiwe. It ivumela umsebenzisi ngenkathi ihlela amafayela alalelwayo ukuze usike, Kopisha unamathisele izingxenye okuqoshiwe. Ngemva ukuhlela ungangeza imiphumela efana echo, okhulisa kanye nomsindo zokunciphisa. Umsebenzisi baye inketho waklebhula ukuhlela ifayela uma wadabula iyiphi iphutha nakuba ezisebenza le software Kulula kakhulu.
Wavepad Ikhodi yokubhalisa 2018 inezici eziningi ukusiza abasebenzisi ukuhlela alalelwayo. Umsebenzisi Ungakwazi ukungenisa amafayela kusuka hard drive ngisho ungakwazi futhi ukungenisa ngokuqondile CD. Kukhona ithuluzi esakhelwe ukuba ashise noma umsebenzisi ufuna. Umsebenzisi ungaba futhi baveze ngokwayo ngezwi kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi. Njengoba Mahhala Wavepad Registration Ikhodi 2018 siqukethe generator ithoni ngisho umbhalo inkulumo generator sici.
Kukhona Ongakuthanda isizathu 9.5 Ukuqhuma Sesifufula
Kunamathebhu ezansi ekuhlelweni iwindi ukuhambisa ngokushesha phakathi amafayela, ithuluzi zoom, ngakho elula ukugqamisa kahle ingxenye umsebenzisi ufuna uma uhlela. Sekukonke Wave pad kuyindlela olukhulu ukuze ukuchwensa, indinganiso evulekile-umthombo yokuhlela ifayela umsindo.
Nch Wavepad Mahhala Registration Ikhodi 2018 Izici:
Mahhala Wavepad Ikhodi yokubhalisa 2018 kulula ukuyisebenzisa futhi abe interface yomsebenzisi-friendly.
Have Ukuhlela amathuluzi afana Imi, ikhophi, namathisela, ukususa, ukufaka, ukuthula, auto-ngombala, kokucindezelwa, iphimbo eshintshashintshayo nokuningi.
Have imiphumela lomsindo amaningi ahlanganisa khulisa, kujwayeleke, Equalizer, imvilophi, Thumela, echo, ukuhlanekezela, njll.
IDirectX futhi Virtual Studio Technology DLL (VST) ukwesekwa i-plugin enikeze abakhiqizi ukufinyelela izinkulungwane amathuluzi eyengeziwe kanye nemiphumela.
Mahhala Wavepad Ikhodi yokubhalisa 2018 isofthiwe isekela cishe bonke alalelwayo ifayela umculo ifomethi kuhlanganise mp3, GSM, WMA, UKUZE, AIF, FLAC, WAV, vox, umsindo yangempela, Ogg, AAC, m4a, maphakathi, AMR, nokunye okuningi.
Batch processing ivumela abasebenzisi ukusebenzisa imiphumela guqula izinkulungwane amafayela njengoba umsebenzi owodwa.
Umsebenzisi kungaba khuhla, search and isibekisombhalo yomsindo ukuhlela eqondile.
Isofthiwe ungakha namabhukumaka kanye izifunda ukuthola ngokushesha, ukhumbule behlangana izingxenye lwamafayela zomsindo eside.
Amathuluzi athuthukile zihlanganisa FFT, zamagama nezwi Tjhugulula.
Have izici eziningi lomsindo sokubuyiselwa ezifana umsindo ukunciphisa bese uchofoza pop ukususwa.
umhleli WavePad Usekela amazinga isampula 6 ukuze 192kHz, stereo noma mono, 8, 16, 24 noma 32 izingcezu.
Hlela umsindo kusuka kubasebenzisi isiqophi amafayela.
nge MixPad Amathrekho lomsindo Mixer Isebenza ngqo.
← KMSpico 11 Final 2018 Ephathekayo-Windows ne-Office Activator AVG 2.3.1 Umshayeli Isibuyekezi Izibuko →